Ihe mere na anaghị m amasị Facebook | Martech Zone
Monday, August 31, 2009 Sunday, November 3, 2013 Douglas Karr
Ndị nke hụrụ m ka m na-ekwu okwu na-anụkarị ka m na-ekwu okwu megide Facebook. Anọ m na Facebook, a na m esonye na Facebook… mana ọ naghị amasị m. Enwere ọtụtụ ihe anaghị atọ m ụtọ na Facebook:
Igodo ahụ enweghị isi na m. Enwere menus, menus akụkụ, igodo na-egosi… M furu efu ma ekwenyeghị na ọ kensinammuo ma ọlị.
Ọ dị m ọchị na Facebook bụ naanị AOL 10.0. Ọ bụ sistemụ mechiri emechi… ọ chọrọ nke ihe niile ma achọghị ka ị pụọ. Enwere nnukwu saịtị na ntanetị niile, kwụsị ịtụ anya ka m mee ihe niile ebe ahụ!
Enweghị nhọrọ maka ịhazi. Ike gwụrụ m na-acha anụnụ anụnụ Facebook (# 3B5998). Ka m tinye mpempe akwukwo na ibe m ma hazie ya!
Ndị nkwado njikọ bụ ọkọnọ na-enweghị ngwụcha nke “Singles”… Single Moms, Single Singles, Singles… Hapụ m naanị m! M pịrị X ugboro narị, nweta isi!
Facebook ga ada (ee, ekwuru m ya!) Belụsọ na ọ nwere ike idozi otu adịghị ike ụwa niile, agbanyeghị. Imirikiti oge m na Facebook ejirila ijikwa FacebookGhara iji ya. Ekwesịrị m ileghara ngwa, eleghara ịkpọ oku anya, leghara ihe omume anya, eleghara arịrịọ ndị enyi m anya, leghara ihe kpatara ya anya, leghara ịbụ onye ofufe, ma leghara mgbasa ozi anya. Ọ dịghị fun… ọ bụ manụ.
Usoro nje nke malitere ịrịa n'ime Facebook bụ nnukwu nsogbu ya. Ebe ọ bụ na m nwere ọtụtụ ndị enyi, ezinụlọ na ndị ọrụ ibe, m na-abanye ma nwee ndepụta ịkpọ oku na-adịghị agwụ agwụ. Ọ bụ ihe nzuzu na anaghị akwụsị akwụsị. Amaara m na e nwere ụfọdụ ntọala m nwere ike ijikwa iji nyere aka nke a… mana enweghị m ike ịchọpụta ebe ha nọ. Naanị m chọrọ igbochi arịrịọ niile ngwa ịmalite.
Nke a bụ echiche m, n'ezie! Ọ ga-amasị m ịnụ nke gị…
Sep 1, 2009 na 3: 02 AM
[seesmic euL7qKPBTh|http://t.seesmic.tv/thumbnail/dDWf2uxDSk_th1.jpg http://www.seesmic.com/video/euL7qKPBTh mara mma]
Okooko osisi sitefarha
Sep 1, 2009 na 3: 58 AM
Chei, daalụ maka ịgbakwunye na ndepụta m ihe kpatara na anaghị m adị ọbụna na Facebook, lol!
M na-enweta òkù sitere n'aka ndị m maara, ndị m na-amachaghị ama na ọbụna ndị m amaghị ndị ha bụ na gịnị kpatara ha ji enwe adreesị ozi-e nke m! Mgbe ọ bụla a na-anwa m (ya bụ, nagged n'ime mgbalị), m na-enweta akụkụ site na TOUS (ọ dịghị onye ọ bụla ọzọ na-agụ ha?) na gag-"Gịnị mere onye ọ bụla ji ekwenye na usoro ndị a!?!"
Sep 1, 2009 na 7: 56 AM
Amaara m ma ọ bụrụ na m chere ogologo oge na m ga-achọta onye ọzọ na-eche otú m si eche FB. Ọ bụ nnọọ ihe ịtụnanya na ha kwesịrị ịnọgide na-anụ ụtọ uto dị otú ahụ. Echere m na a ga-enwe ọtụtụ ndị na-eji FB n'okpuru nhụjuanya naanị n'ihi na ọ bụ akara ngosi ọkọlọtọ na ihe onwunwe web2.0. Ọ ga-amasị m ịhụ ya ka ọ gbanwee kpamkpam ma ọ bụ mechaa nwee ụdị ọnwụ ahụ na Internet Explorer. Mgbe m nọ na FB, ana m ajụ onwe m ajụjụ a "kedu ka m ga-esi mee na-enweghị FB wee dị irè?"
Septemba 1, 2009 na 12:12 ehihie
Doug, ekwere m gị. Facebook na-atọ m ụtọ nke ukwuu na mbụ, enwere m mmasị na ohere ahụ iji nwetaghachi ndị enyi ochie. Otú ọ dị, ọhụrụ nke "ihe egwuregwu ụmụaka" agwụla n'oge a ma achọpụtara m na usoro ahụ aghọwo ihe na-agwụ ike iji na jikwaa. Dị ka gị, m ga-edozi ebe m na-etinye oge m. Ọ bara uru oge iji gafee akwụkwọ ịkpọ òkù "agha mafia" na-enweghị njedebe na arịrịọ egwuregwu nzuzu? Ọtụtụ mgbe, ọ bụghị. M ka na-eji ọrụ ahụ (n'ụzọ dị ntakịrị) mana m na-ekerịta mmetụta gị na ha chọrọ usoro dabere na onye ọrụ. Ọ dị m ka FB nwere ọtụtụ egwuregwu na ngwa, yana ezughị ezigbo ndị mmadụ na-ejikọ.
Septemba 1, 2009 na 3:31 ehihie
Echiche na-aga n'ihu Doug. N'agbanyeghị na m bụ onye na-akwado facebook ọ ga-amasị m itinye otu na listi ahụ. Kedu maka:
#6 Enweghị ụdị azụmaahịa ọ bụla na-adịgide adịgide na-eme ka ọ dị m ka FB ga-apụ otu ụbọchị na anwụrụ ọkụ.
Septemba 1, 2009 na 12:45 ehihie
FB na-atọ m ụtọ, mụ na ọtụtụ ndị enyi m ochie kpafuru akpakọrịta. Ma eleghị anya, ọ nwere ezi ihe mere m ji tụfuo ha na mbụ. Ekwenyere m na #5 karịsịa; ọ bụ ihe mbụ m na-eme mgbe m na-abanye na: Gbanahụ ihe. Achọghị m igwu egwu na Mafia ma ọ bụ tọọrọ m yana kedu ihe dị na ugbo na zoos mebere? Gịnị kpatara na enweghị m ike ịhọpụta ndị enyi n'aha ikpeazụ ha?
Septemba 1, 2009 na 6:54 ehihie
ị dabara nke ọma, Douglas. Ndị a bụ kpọmkwem ọdịiche dị n'etiti FB na Friendfeed. Ma ọ bụrụgodi na FB nwetara FF, echeghị m na ọ ga-aka mma n'ọdịnihu.
Septemba 1, 2009 na 8:34 ehihie
Ekwenyere m na isi ihe niile ma ewezuga #3 - A na m ewere ya dị ka ngọzi na ndị mmadụ enweghị ike MySpace-ify ibe profaịlụ ha. Ma ọ bụghị ya, a ga-edobe anyị n'ọnọdụ niile na-egbukepụ egbukepụ na egwu na-akpasu iwe nke chụpụrụ ndị mmadụ pụọ na MySpace na mbụ.
Septemba 3, 2009 na 3:20 ehihie
ee.. ọ dị ka anyị nwere otu "okwu ịkpọasị" ebe a. m na-ahọrọ iji twitter karịa facebook, dị mfe karị, dị mfe na ngwa ngwa
Septemba 25, 2009 na 1:28 ehihie
Azịza ya bụ ka ị bụrụ android paranoid. Anaghị m ekwe ka onye ọ bụla hụ profaịlụ m, naanị ndị bụbu enyi! N'ezie nke a na-arụ ọrụ naanị ruo mgbe ịchọrọ ijikọ onye na-eme otu ihe ahụ. Mgbe ahụ otu onye n'ime unu ga-ewepụ mmachi a nwa oge, ka onye nke ọzọ wee nwee ike ịkpọ ha…